किन ओरालो झर्दै छ नेप्से ?
प्रत्येक अवाले काठमाडौं, १३ पुस | पुष १३, २०७४
निर्वाचनपछि मात्रै नेप्से परिसूचक १ सय ३१ दशमलव १३ बिन्दु घटेको छ – निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै घट्न सुरु गरेको नेप्से परिसूचक बुधबार १ हजार ४ सय २५ दशमलव ५१ बिन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिलाई बजारसँग जोडेर हेर्नेहरूले निर्वाचन परिणामले वाम सरकार बन्ने निश्चित भएसँगै बजार ओरालो लागेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । मंसिर २४ गते १ हजार ५ सय ५६ दशमलव ६४ बिन्दुमा नेप्से रहेको थियो ।
यो अवधिमा मात्रै नेप्से परिसूचक १ सय ३१ दशमलव १३ बिन्दु घटेको छ । तर, लगानीकर्ता सुरवीर पौडेले भने अहिलेको बजार घट्नुमा राजनीतिक प्रभाव न्यून मात्रै रहेको बताउँछन् । ‘वाम सरकार बन्ने भएकाले बजार घटेको भन्नु अनावश्यक हल्ला मात्र हो,’ उनले भने, ‘बाघ कराउनु, बाख्रो पनि हराउनु भनेजस्तै भएको मात्र हो ।’ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार बनेपछि लगानीका नयाँ वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । नयाँ नीतिअनुसार सार्वजनिक हुने नयाँ योजनाका लागि अहिले लगानीकर्ताले होल्ड गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले लगानीकर्ता हाल नयाँ सरकार बन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभावले अहिले बजारलाई प्रभावित पारेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि कर्जा दिन आनाकानी गर्न थालेका छन् । साथै, पुँजी संकलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आकर्षक ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको पहिलो चार महिनाको समष्टिगत आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो विवरणमा केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण आप्रवाहमा (रेमिट्यान्स) कमी आएको उल्लेख गरेको छ । ‘रेमिट्यान्स घट्नु बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुनुको एक मुख्य कारण हो,’ पौडेलले भने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेपछि रेमिट्यान्स घटेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, बजारमा सेयर आपूर्ति बढ्नु पनि नेप्से ओरालो लाग्नुको अर्को प्रमुख कारण हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरूले एफपिओ, बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गरेका छन् । जसले गर्दा पनि बजारमा सेयर आपूर्ति बढेको छ । त्यसैगरी, नयाँ कम्पनीहरूले जारी गरेको आइपिओले पनि बजारमा सेयर आपूर्ति बढाएको छ । सेयर आपूर्ति बढेपछि सेयरमूल्य घट्नु स्वाभाविक भएको पौडेलको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले गत आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सो लाभांश वितरण गर्न साधारणसभा तथा नियामक निकायबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीहरूले बुक क्लोज गर्नु पनि बजार घट्नुको एक कारक हो । बुक क्लोजपछि नेप्सेले कम्पनीको मूल्य समायोजन गर्छ र सेयरमूल्य घट्छ । पौडेलका अनुसार बजार निर्माता नभएका कारण पनि नेपाली धितोपत्र बजारमा तीव्र उतारचढाव आउँछ । बजार निर्माता तथा म्युचुअल फन्डहरूले पनि बजारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन २० अंक घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार २१ दशमलव ५३ अंक घटेको छ । नेप्से ओरालो लाग्न थालेपछि बजारमा सेयर बिक्रीकर्ताको चाप बढेको छ । लगानीकर्ताहरू सेयर बिक्री गरी निक्षेप गर्नतर्फ लागेको एक ब्रोकरले बताए । निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेका कारण लगानीकर्ता निक्षेपतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
बुधबारको बजार उतारचढाव
बुधबार बजार खुलेलगत्तै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको नेप्से कारोबारको आधा घन्टा अवधिपछि केही सम्हालिएको थियो । त्यसपछिको समयमा उकालो लागेको नेप्से १ हजार ४ सय ४३ बिन्दुमा पुगेपछि पुनः ओरालो लागेको थियो । कारोबारको पूर्वार्धमा तीव्र उतारचढाव भएको नेप्से मध्याह्नपछि भने करिब स्थिर नै रह्यो । त्रसित लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री गर्न थालेपछि नेप्से ओरालो लागेको हो । कम्पनीहरूको सेयरमूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तिएपछि राम्रा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताका कारण बुधबारको बजार उतारचढाव भएको हो ।
‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ४ दशमलव ७२ अंक घटेर ३ सय दशमलव १३ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन २४ दशमलव २३ स्केलमा पुगेको छ । ओभरसोल्ड जोनमा रहेको आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद चापभन्दा बिक्री चाप बढी रहेको संकेत गर्छ । नेप्से ओरालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन १ सय ५६ कम्पनीको ७ हजार २ सय ८४ पटकको कारोबारमा रू. ७६ करोड ५७ लाख ६९ हजार ६ सय ६२ बराबरको १३ लाख ६८ हजार ४ सय ५७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । बजार पुँजीकरण यस दिन घटेर रू. १६ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यस दिन सो कम्पनीको रू. १० करोड ९९ लाखभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । त्यसैगरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि यस दिन रू. १० करोडभन्दा बढीको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । १०० प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको र सो बोनस सेयरका लागि बुक क्लोज मिति नजिकिँदै गएका कारण यस बैंकको सेयर कारोबार बढेको हो । घटेको बजारमा महुली सामुदायिक लघुवित्तको सेयरमूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सिन्धु विकास बैंकको सेयर मूल्य भने यस दिन ५ दशमलव ६ प्रतिशत घटेको छ ।
उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव २६ प्रतिशत बढेको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक २ दशमलव ४२ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी, बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ८४ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १ दशमलव ५१ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको १ दशमलव ४४ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ३६ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको १ दशमलव २५ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत र होटेल समूहको शून्य दशमलव २७ प्रतिशत घटेको छ ।